Shiinuhu wuxuu tijaabiyaa Dhimashada Cudurada Kulaylaha ee Kulaylaha iyo Soo-saareyaasha - Baili Medical
Guriga > Alaabta > Tijaabada Caafimaadka > Tijaabooyinka Dhimashada Cudurrada Kulaylaha
Tijaabooyinka Dhimashada Cudurada Kulaylaha waxaa keena bakteeriyada, fayrasyada, protozoa, Gooryaanka iyo cudur-sidaha kale ee si xun u waxyeeleeya caafimaadka aadanaha. Xog la’aanta baahsanaanta cudurkan oo la xiriirta faqriga iyo go’doonka awgeed, dhaqaale la’aanta ayaa keentay in la dayaco. Si loo yareeyo culeeska cuduradan, waxaan u baahanahay inaan diirada saarno dhinacyo badan oo kala ah barnaamijyada ciribtirka cudurada, baarista cudurada, maareynta daawooyinka, baarista vector iyo epidemiological, kuwaas oo ay ugu muhiimsan tahay ogaanshaha cuduradan.
Tijaabooyinka Dhimashada Cudurrada Kulaylaha ayaa inta badan ka maqan calaamado iyo calaamado gaar ah, ogaanshaha hore iyo degdega ah ayaa dhamaantood aad muhiim u ah. Waqtigan xaadirka ah, la'aanta hababka ogaanshaha habboon ee waxtarka leh waa mid ka mid ah arrimaha la dayacay. Waxayna horseedaan khasaare dhaqaale oo ay keento dhayalsigu. Tan iyo markii la daabacay Qorshaha WHO 2020 ee Ciribtirka Cudurrada Kulaylaha ee la dayacay, culeyska dhaqaale ee wax ka qabashada cudurrada qandhada ayaa muujinaya muhiimada ogaanshaha degdegga ah iyo teknoolojiyadda baarista waxayna kor u qaadaysaa horumarintooda iyo adeegsigooda. Baadhitaanka iyo daawaynta cudurradan, mudnaanta ayaa ah in la horumariyo farsamooyinka ogaanshaha xasaasiga ah oo wax ku ool ah, iyo in la gaaro xakameynta tayada iyo sahayda ku filan ee xarumaha caafimaadka ee kala duwan si loo baaro, loo xakameeyo loona baabi'iyo cudurradan.
Tijaabooyinka Dhimashada Cudurrada Kulaylaha, warqaddan, cilmi-baaristii sannadihii la soo dhaafay etiology, immunology, bayoolaji molecular, ogaanshaha tignoolajiyada microfluidic iyo biosensor ayaa la soo koobay, habka ogaanshaha wuxuu leeyahay hawlgal ku habboon, xasilloon oo la isku halleyn karo, gaar ah oo dareen sare leh, waana ku habboon ogaanshaha goobta, iwm, laakiin habka codsiga goobta waxtarka u dhexeeya baaritaanka dembiyada iyo shaqada xeer ilaalinta ayaa weli u baahan qiimeyn dheeraad ah.
Xirmada baaritaanka-dagdag-antigen-ogaanshaha-caafimaadka ogaanshaha
Xirmada-baadhista-baadhista degdegga ah ee-antigen-ka-baadhista:
Noocyada cudurada kulaylaha waxaa ka mid ah:
(1) Cudurrada dulin ee kala duwan.
Infekshannada fursadda ah ee ku dhaca bukaannada difaaca jirka.
(4) Cudurrada faafa ee dhif iyo naadir ah.
(5) Qaar ka mid ah cudurrada faafa ee dhowaan la helay.
Qalabka Tijaabada Kahortagga ee Zika ee caanka ah
Xirmada baarista ee Zika ee caanka ah:
(5) Cudurrada faafa ee dhawaan la helay.
Xirmooyinka Baarista Cudurka Duumada ee Caafimaadka
Xirmooyinka baaritaanka cudurka Duumada ee caafimaadka:
Waxaan haynaa kuwa ugu cusub Tijaabooyinka Dhimashada Cudurrada Kulaylaha oo laga sameeyay warshadeena Shiinaha oo ah badeecadeena ugu weyn, oo noqon karta jumlo. Baili waxaa loo yaqaanaa mid ka mid ah Tijaabooyinka Dhimashada Cudurrada Kulaylaha soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha caanka ah ee Shiinaha. Waxaa lagugu soo dhawaynayaa inaad iibsato Tijaabooyinka Dhimashada Cudurrada Kulaylaha la habeeyey oo wata liiskayaga qiimaha iyo xigashada. Badeecadahayagu waa shahaado CE waxayna ku jiraan kaydka macaamiisheena si ay wax uga doortaan. Waxaan si dhab ah u rajaynaynaa wada shaqayntiina.